ဒီတစ်​ခုက​တော့paper pencil holderပါ။ခဲတံ၊​ဘောလ်​ပင်​စတာ​တွေထည့်​လို့ရ​အောင်​ပြုလုပ်​ထားတာပါ။စက္ကူ​ခေါက်​​တွေအများကြီးပြုလုပ်​ပြီး​တော့မှတစ်​ခုနှင့်​တစ်​ခုဆက်​ပြီးပုံ​ဖော်​ထားတာပါ။ပြီး​နောက်​အနီ​ရောင်​ပန်းပွင့့်​လည်းပါပါတယ်​။လိုအပ်​တဲ့ပစ္စည်း​တွေကပန်းစက္ကူ၊​ရောင်​စုံစက္ကူ၊ကတ်​​ကြေး၊​ကော်​ဘူး၊​ပေတံ၊ခဲတံတို့လိုအပ်​ပါတယ်​။ပြုလုပ်​ရမည့်​အဆင့်​​တွေကpencil holderတစ်​ခုဖြစ်​ရန်​စက္ကူ​ခေါက်​​တွေဆက်​ပြီးပြုလုပ်​ရမှာဖြစ်​တဲ့အတွက်​စက္ကူ​ခေါက်​​တွေပြုလုပ်​ရမယ်​။ပြီး​နောက်​တစ်​ခုနှင့်​တစ်​ခုဆက်​ရမယ်​။ပြီး​တော့ပန်းပွင့်​တစ်​ပွင့့်​ပြုလုပ်​ရမှာပါ။
myanmar creative colorchallenge art flower
ကဲ resttm ယူပြီဗျာ wall ထဲအလည်လာတဲ့သူတွေလည်း လုပ်တတ်စေချင်မိတယ်
GREAT WORK @asterkame ,detailed pics helps us to try it easily.Very useful craft work.Keep it up.
wow beautiful dear keep doing
ဒါလေးလည်းကြိုက်လိုက်တာ ထရန်ကွက်လေးနဲ့ အမြင်လေးဆန်းလို့
လှနေရော စားပွဲပေါ် တင်ထားချင်တယ်😍
pencil holder လေး အလှလေးပါ။စာရေးစားပွဲပေါ် အလှဆင်ထားလို့ ကောင်းမယ်နော်။Good idea!
လုပ်ပြီး စားပွဲပေါ်တင် သုံးလို့ လှတယ်ဗျာ
ဒါ​လေးက ​ဘော့ပင်​တို့ ခဲတံတို့သိမ်းထားလို့Ok တာ​ပေါ့
စက္ကူအစား တခြား​ရောင်​စုံ ခိုင်​ခန့်​တာ​လေးနဲ့ဆိုရင်​okဘဲ
MSC ကထုတ်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းမှာ ဒီကဏ္ဍလေးထည့်ရမယ်
လုပ်​ရတာ လက်​ဝင်​သလို ချစ်​လဲ ချစ်​စရာ​လေးဗျာ
ဒလိုတင်ဖို့ photo များများ upload လုပ်ရမှာဘဲလေးစားတယ်ဗျ
အစ်‌ကို ‌ပြောသလို စာအုပ်‌ထုတ်‌ပါ ။အစ်‌ကိုတို့ အား‌ပေးမှာ‌ပေါ့။
honeysara (59) ·4months ago